အန္တာတိက၏နို့တိုက်သတ္တဝါများ - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
By ဂျူလီယာ Jarvis
ပုံရိပ်တွေ: Iglika Trifonova
Iglika Trifonova 2006 အတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အအန္တာတိကသွားနှင့်သူမသိမ်းပိုက်အဓိကအားဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ဇီဝဗေဒပညာရှင်အယ်လ်မီရာ Trakiiska DNA ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်သွေးနမူနာယူပြီးအဘို့အပင်ဂွင်းငှက်များကိုဖမ်းအကူအညီနဲ့တစ်လိုအပ်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
"ငါသည်တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ဖြစ်လာခဲ့သည် "ဟုအဆိုပါပင်ဂွင်း Catcher", တခြားသူတွေရယ်စရာငါ့ကိုပဌနာဖို့အသုံးပြုအဖြစ်။ ငါသိပ္ပံ၏နာမ၌ 50 ပင်ဂွင်းငှက်များကိုကျော်ဖမ်းနိုင်ခဲ့သည်။ ပိုခက်ခဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအယ်လ်မီရာဟာနမူနာယူနေချိန်မှာသူတို့ကယ့်ကိုခက်ခဲကိုက်နှင့်၎င်းတို့၏နည်းနည်း flappers နှင့်ငါ့ကိုဝင်တိုက်သောကွောငျ့, သူတို့ကိုကိုင်ဖို့ပဲ။ ငါအမည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွဲဖက်အောင်မြင်မှုရရန်သက်သေပြ, ဒါအယ်လ်မီရာတံဆိပ်ခတ် DNA ကိုသုတေသနပြုထံအပ်နှံသူမ၏လာမယ့်စီမံကိန်းကို၌ငါ့ကိုပါဝင်သည်။ ကြှနျတေျာ့ဒုတိယခရီးစဉ်အတွင်းကျနော်တို့ကဖျံအလင်းပာဖြစ်ကြပြီးချက်ချင်းကိုသင်အနံ့နိုငျသောကွောငျ့, ခက်လွန်းသောဖျံတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးအစားအရေပြားကနေနမူနာကိုယူခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့တကယ်မြန်ဆန်စွာခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နမူနာ ယူ. ပြေးခဲ့ကြရသည်။ အဲဒီမှာ adrenaline အလုအယက်စာရေးခဲ့ပေမယ့်အရမ်းပျော်စရာအများကြီးဖြစ်ခဲ့သည်။ တတိယအကြိမ်, ထိုအလုပ်၏ဝဲ, လူများများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ၏သုတေသနလုပ်ငန်းမှာအန္တာတိကအတွင်းအနည်းဆုံးသုတေသနပြုခေါင်းစဉ်ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ ဤဖြစ်စဉ်အားလုံးသည်ငါနောက်ကွယ်မှဓာတ်ပုံ left မဆိုလိုပါ, ငါသည်ဤလောက၏၏အခြားဘက်ခြမ်းကနေရိုက်ချက်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏အတူပြန် လာ. အလုံးစုံတို့ကိုနှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်မအတော်ကြာဓာတ်ပုံကိုပြပွဲရှိခဲ့ပါတယ်။ အန္တာတိကယင်းအထိခိုက်မခံသောလူတို့နှင့်စာအုပ်များအတွက်ဖန်တီးမှုစွမ်းအင်ငါ့ကိုနှိုးရာရာအရပျ, ဓာတ်ပုံများ, သက်သေပြနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံရပ်တည်ချက်အတွက် created ပန်းချီကားများဖြစ်၏။ "
ဟုတ်ပါတယ်, ကြီးမားတဲ့ခရုဇ်သင်္ဘောများလက်တင်အမေရိကရှိအရှိဆုံးတောင်ပိုင်းမြို့မြို့တို့မှထွက်သွား - Ushuaia နှင့် Punta Arena သည်ဝင်ရိုးစွန်းနွေရာသီရာသီအတွက်ခရီးသွားဧည့်ရာပေါင်းများစွာတင်ဆောင်။ သူတို့သင်္ဘောများနှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံအန္တာတိကပေါ်နေပါပေမယ့် - ကပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကကမ်းခြေလာရန်ခွင့်ပြုပြီးတော့တိရိစ္ဆာန်များ၏လူဦးရေပြုသည်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကြီးမားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ကြောင်းတစ်ခါတစ်ရံတွေ့ကြုံတတ်၏။ အဆိုပါဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်လူ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလေ့လာပြီးဝမ်းနည်းစရာသုတေသနဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ဘက်တီးရီးယားမျှနှင့်အတူဤရိုင်းနှင့်အထီးကျန်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာတိရိစ္ဆာန်များကျနော်တို့ကိုဆောင် ခဲ့. အနာရောဂါနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မရနိုင်သည်ကိုပြသပါ။ ငါအနီးရှိကျွန်းများထဲမှာပင်ဂွင်းငှက်များနှင့်ဖျံ၏လူဦးရေသိသိသာသာကျဆင်းသွားခဲ့ကြပြီးအဓိကအကြောင်းရင်းခရီးသွားဧည့်, ကမ်းခြေလာတဝိုက်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်တိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူဓါတ်ပုံတွေကိုယူခွင့်ပြုရသောခရီးသွားဧည့်သင်္ဘောများဖြစ်ပါသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖို့မျက်စိကျသခေံဖွစျ၏။ ငါပိုပိုပြီးန့်အသတ်ဖြစ်တို့အားဤသို့သောရှေးထုံးများမျှော်လင့်ပါတယ် - အန္တာတိကတစ်ဦးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်ပြီးအတိအကျထိုကဲ့သို့သောရှေးထုံးများအတွက်မက်ဒရစ် Protocol ကိုဘူလ်ဂေးရီးယားဖြစ်သောတို့တွင်တိုက်ကြီး, အုပျစိုးသောနိုင်ငံများကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်အန္တာတိက၏ Flora နှင့် Fauna ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
လူအများ၏မျက်နှာများ, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်လာသူကိုအထူးသဖြင့်သူများ။ ငါသည်သူတို့၏စိတ်ခံစားမှုနဲ့အတှေးအနေဖြင့်ပြောင်းရွေ့နေပါတယ်။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များလည်းမျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေရှိသည်, တိုင်းတံဆိပျကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားစကားရပ်ရှိပြီးသူတို့ကိုငါနှိုင်းယှဉ်အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ ငါအဖိုးတန်ကျောက်များကဲ့သို့အတောက်တည်းဟူသောရေအတွက်ပွင့်လင်းရေခဲလုပ်ကွက်ကနေတောက်၏ထောင်ပေါင်းများစွာဖမ်းယူကိုချစ်။ ငါရေခဲနေသောတိုက်ကြီးကိုသွားအခါတိုင်းငါကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိငါသည်ဤအချိန်ငါအရမ်းလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
အလက်ဇန်းဒါး Yazov, အ Matrix - ပျံ့ကားမောင်းသူ
အန္တာတိက, Iglika Trifonova | 20-05-2019 | rating:5/ 30